Best Maker mgbanwe
Best Buy price Maker $ 447.97 MKR/DAI Exmo
Ahịa ahia kacha mma Maker $ 624.74 MKR/BTC COSS
Ihe kachasị mma Maker bụ ihe kachasị mma ịzụta ma ọ bụ nke ọnụahịa dabere na nsonaazụ nke ụzọ abụọ ego ego na-agbanwe. Ọnụego mgbanwe ego ego Maker nke banki adighi atọrọ ka ọ dị na ego mbu, kama ọ bụ kpebisiri ike maka azụmahịa ọ bụla n'etiti ndị sonyere mgbanwe ahụ. Mgbanwe crypto dị iche iche nwere oke azụmaahịa azụmaahịa. Ọ dị mfe ịghọta na Maker ọnụego mgbanwe ego ego n'otu n'otu na-ahaziri ọnye mgbanwe crypto ọ bụla.
Best Maker obere akpa
June 06, 2020 Kachasị mma ịzụta Maker na June 06, 2020 Ọnụ ahịa kacha mma Maker na $ sell_pair ụzọ azụmaahịa na $ sell_market ahịa.
Mpempe akwụkwọ kachasị mma Maker bụ echiche onwe onye nke ndị sonyere n'ahịa crypto na ndị na - ejide crypto. Kachasị Maker obere akpa nwere nchekwa kachasị mma na ntọala nche. Ejiri ezigbo mgbanwe ego ego Maker n'oge ahọpụtara site na ịmụ nsonaazụ nke ọnụego azụmaahịa maka ịzụta na ire nke ego ego. Anyị na-amụ ahịa Maker ahịa mgbanwe ego ego ego, anyị wee họrọ azụmaahịa kachasị mma maka ịzụ na ire.
Ụlọ ahịa Maker kacha mma
Oke ego Maker ọnụego mgbanwe maka taa bụ 06/06/2020 - egosiri na tebụl azụmahịa niile maka taa. Kachasị mma Maker ịzụta na ire ọnụ ahịa maka taa bụ 06/06/2020 n'isi nke ibe. N'ime tebụl ọnụego kacha mma Maker, ị nwere ike ịchekwa ego dị iche iche Maker ma họrọ nke kachasị mma na nke gbanwere gbanwere Ọ ka mma ịchọrọ maka mgbanwe ego ego. Ihe ngbasa ozi nke Maker Kasị mma ọnụego mgbanwe taa 06/06/2020 na-enyocha gị ọnụego ego ego kachasị mma site na ezigbo ezigbo ihe niile dị na ntanetị.
BTC ETH USDT DAI IDR KRW VET TRY IDK USD Ọzọ ...
Tebụl na-egosi taa ọnụahịa Maker nke ọ bụla site na netwọk ego ego. A gbanwere ọnụego mgbanwe maka ọnụọgụ abụọ abụọ na dollar US.
HitBTC MKR/BTC $ 466.62 $ 375 993 -
HitBTC MKR/USDT $ 475.30 $ 294 860 -
HitBTC MKR/ETH $ 465.23 $ 177 031 -
HitBTC MKR/DAI $ 467.22 $ 3 981 -
KuCoin MKR/BTC $ 470.70 $ 618 926 -
KuCoin MKR/ETH $ 471.24 $ 239 221 -
KuCoin MKR/DAI $ 467.98 $ 7 060 -
ProBit Exchange MKR/USDT $ 472.27 $ 79 286 -
ProBit Exchange MKR/KRW $ 470.32 $ 50 943 -
ProBit Exchange MKR/BTC $ 471.69 $ 18 206 -
OKEx MKR/USDT $ 473.65 $ 2 988 945 -
OKEx MKR/BTC $ 472.40 $ 2 121 382 -
OKEx MKR/ETH $ 473.33 $ 767 764 -
Bitfinex MKR/BTC $ 466.89 $ 157 671 -
Bitfinex MKR/ETH $ 466.08 $ 44 881 -
Bitfinex MKR/USD $ 471 $ 40 617 -
Omgfin MKR/USDT $ 474.23 $ 77 140 -
Omgfin MKR/BTC $ 473.53 $ 48 126 -
Omgfin MKR/ETH $ 474.34 $ 7 092 -
CoinEx MKR/USDT $ 478.67 $ 66 766 -
CoinEx MKR/BTC $ 476.94 $ 62 075 -
Sistemkoin MKR/TRY $ 475.97 $ 150 165 -
Sistemkoin MKR/BTC $ 479.20 $ 85 922 -
BitMart MKR/BTC $ 484.22 $ 2 291 -
BitMart MKR/ETH $ 474.05 $ 1 313 -
OceanEx MKR/VET $ 470.85 $ 225 323 -
OceanEx MKR/USDT $ 473.69 $ 219 849 -
Dex-Trade MKR/BTC $ 467.17 $ 262 815 -
Dex-Trade MKR/ETH $ 468.28 $ 95 039 -
OKEx Korea MKR/BTC $ 473.67 - -
OKEx Korea MKR/USDT $ 475.10 - -
BKEX MKR/ETH $ 509.66 $ 643 976 -
BKEX MKR/USDT $ 476.56 $ 25 302 -
Switcheo Network MKR/ETH $ 480.46 $ 89 909 -
Switcheo Network MKR/DAI $ 462.84 $ 1 696 -
Exmo MKR/BTC $ 466.45 $ 16 390 -
Exmo MKR/DAI $ 447.97 $ 15 725 -
Gate.io MKR/USDT $ 466.64 $ 9 195 -
Gate.io MKR/ETH $ 460.51 $ 6 429 -
COSS MKR/USDT $ 552.96 - -
COSS MKR/BTC $ 624.74 - -
Poloniex MKR/BTC $ 478.41 $ 17 275 -
Poloniex MKR/USDT $ 492.61 $ 489 -
CROSS exchange MKR/BTC $ 473.73 $ 388 118 -
GOPAX MKR/KRW $ 487.25 $ 1 002 -
Rekeningku.com MKR/IDR $ 472.39 $ 29 435 -
BitAsset MKR/BTC $ 465.43 $ 981 128 -
Indodax MKR/IDR $ 485.31 $ 43 421 -
Uniswap MKR/ETH $ 457.92 $ 845 924 -
Bibox MKR/BTC $ 454.20 - -
BitBay MKR/BTC $ 485.79 $ 46 -
IDEX MKR/ETH $ 480.65 $ 1 820 -
Fatbtc MKR/ETH $ 499.76 $ 49 653 -
Kyber Network MKR/ETH $ 467.79 $ 301 990 -
Tokenomy MKR/IDK $ 472.54 $ 3 415 -
E gosipụtara ọnụego ịzụta kacha mma Maker na dollar ka enwere ike ịkwụ ọnụ ya n'ụzọ ziri ezi. Maka ụdị ego enwere ike Maker gosipụta nke dị ọnụ ala karịa ego azụtara kacha mma. Maker ọnụego ire ahịa kacha mma dị na elu akwụkwọ a na dollar dollar. N’akụkụ ọnụ ahịa ire ahịa crypto kacha mma e nwere njikọ nke gbanwere ebe a na-ere Maker na ọnụahịa a kachasị mma.
Ulo ahia “uzo abuo” gosiputara ego nke enwere ike ree Maker. A na-ahazi ngosipụta mgbanwe site na ọnụego mgbanwe kacha mma maka ire na ịzụ Maker. Egosipụtara ọnụego a na dọla US. Nwere ike iji nzacha nke ego dị iche iche. Ọ dị n'elu tebụl nke mgbanwe crypto kacha mma. Anyị na-emelite ezigbo ozi gbasara ezigbo mgbanwe maka azụmaahịa na ire Maker.